Waxa aan bilaabay qoraalkan waqti aan dhageysanayay mid kamid ah heesaha Daahir Gacameey taas ee uu curiyay mar uu booqday Buulaburte. Heestan waxa uu fanaanka si qurux badan ugu qeexay quruxda dabiiciga ah ee magaalada. Sheekada waxa ay ku bilaabatay sida soo socota. Maalin ayaan Google geliyay Buulaburte. Islamarkiiba sawirro iyo heeso tira badan ayaa […]